Archive du 20191008
Governemanta Misy minisitra tena ratsy toerana
Governemanta tsy mba miray hina ny mpikambana ao anatiny rehefa misy ny tsy fetezana eo amin’ny ministera iray. Hita taratra izany tamin’ity raharaha bakalorea izay nahasaringotra ny ministry ny fampianarana ambony.
Fandraisan’i Madagasikara ny MCB Tour Hisy akony amin’ny sehatra fizahantany
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy tany Parisy renivohitr’i Lafrantsa tamin’ny herinandro lasa teo ny fifaninanana Golf MCB Tour Championship Madagascar izay hotanterahina eto amin’ny firenena.
Tontolon’ny fifandraisan-davitra Hidirana lalina kokoa ny 5G
Taorian’ny fifanaraham-piaraha-miasa notontosan’ireo orinasam-pifandraisana miisa 2 dia ny Telma avy eto Madagasikara sy ny Ericsson natao tatsy Le Caire,
Paositra Malagasy Mampahafantatra ireo karazana hajia nampiasainy hatramin’izay
Mankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an’ny paositra izay marihina isaky ny datin’ny 09 oktobra ny paositra Malagasy.
Faritra Tsimiroro Miaina anaty fahantrana tanteraka ny mponina
Ankoatra ireo olana ara-tsosialy, dia ratsy lalana tanteraka ny mihazo ny any Tsimiroro izay eo anelanelan’i Morondava sy Maintirano.
Mpitaingina moto voahitsaky ny kamiao Niparitaka ny atidohan’ilay tovovavy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina tetsy Manakambahiny, akaikin’ny Le Quartz omaly tokony ho tamin’ny 02 ora folakandro tany ho any.
Olona ara-panambadiana Olona 11 indray maty noho ny gidragidra
Olona 11 no indray namoy ny ainy vokatry ny tsy fitovian-kevitra tamina fisaraham-panambadiana tao amin’ny fokontany Anonobe, Kaominina Emagnabo Distrikan’i Tolagnaro Faritra Anôsy ny faran’ny herinandro lasa teo.
Antananarivo renivohitra 100 isan’ora ny fandikan-dalana amin’ny fifamoivoizana
Saika mahatratra 2 isaky ny minitra ny tsy fanajana ny fitsipiky ny fifamoivoizana eto Antananrivo Renivohitra.
Asa ratsy anaty finday sy facebook Mitohy ny fikarohana ireo mpisoloky laza adina bakalorea
4 tamin’ireo 7 izay voarohirohy tamin’ny fakana tahaka bakalôrea tao Arivonimamo no efa any am-ponja miandry ny fitsarana.
Anosizato Andrefana Mirongatra ny tsy fandriampahalemana, ifampitadiavana ny rano
Maro ireo olana sedrain’ny mponina ao anatin’ny kaominina Anosizato Andrefana, distrikan’Antananarivo Atsimondrano.